Esi meziwanye Email Pịa-Site na Ọnụego
Dr. Todd si, Ebe e-commerce maka ngwaahịa nlekọta ụkwụ dị mma, tụgharịrị Obere igbe maka ngwugwu ahia ahia omenala. Otu ihe dị mkpa nke ngwakọta ahịa nke Dr. Todd bụ ahịa email. Anyị mepụtara usoro ọdịnaya ọhụụ, imepụta ọhụụ ma wepụta kalenda ederede. Anyị enyochaala otu n'ime ozi-e nkwado nke Dr. Todd iji gosi ihe na-eme ka ndị mmadụ pịa ma gbanwee.
A Clear Nye
Nwere ike ịnụla okwu ahụ bụ "gamification nke couponing" dị ka ụzọ isi kọwaa ihe Groupon. Anyị niile maara na ndị mmadụ nwere mmasị ịme akara, mana ọrụ gọọmentị dị ka Groupon chọrọ nkewa ụzọ na ọkara nke ọnụahịa gị akwụburu onwe ya. Anyị blogged banyere ewere okwu n'ime gị aka ike a Groupon-dị ka nkwalite. Nke a bụ ihe atụ nke a na-eme. Icheta ego karie ka ọ dị na mbụ ma belata ya ntakịrị karịa oge 24 nyere aka ịkpalite iwu.
You bu onye isi ma obu ihe oyiyi ichoro? Ndị dị iche iche na-ata ahụhụ n ’ụdị ọdịnaya dị iche iche. Nwere ike ịnwale mgbe niile iji hụ ụdị njikọ njikọta kachasị adọta n'aka ndị na-ege gị ntị, mana ụzọ kachasị mma bụ ịnye nhọrọ nke otu njikọ ahụ. Isi okwu ahụ, onyonyo ahụ, nkọwa ngwaahịa ya na thelọ Ahịa Shop Ugbu a jikọtara ngwaahịa a.
Psychology nke ppingzụ ahịa
Asụsụ nke gụnyere nkwa ngwaahịa ma ọ bụ usoro nloghachi dị mfe setịpụrụ ụda maka ịzụ ahịa na-enweghị nhịahụ. Agba nwekwara ike ịrụ ọrụ dị mkpa. Dịka ọmụmaatụ, oroma, na-eme oku iji mee ihe.
Ọ bụrụ na onye ahịa etinye aka iji mepee email gị, ha nwekwara ike ịmasị gị na Facebook. Inye njikọ na blọọgụ gị ma ọ bụ profaịlụ mmekọrịta gị na-akpọ ndị ahịa ume itinye aka na nzụta.
Na-anwale mgbe niile
N'oge gara aga, anyị anwalela oge izipu, usoro isiokwu na ihe ndị ọzọ. Dika anyi nwalere uzo ohuru ohuru a, anyi nwalere nkewa nke abuo. Anyị weere ndepụta nke ndị ahịa nwere usoro akụkọ ihe mere eme maka ọgwụgwọ callus na ndị ọzọ na ndepụta email Dr. Todd. Na ogologo oge, ị nwere ike ịchekwa ego site na izipu ọdịnaya ziri ezi na kọntaktị ziri ezi.
The ahịa na iji akụkọ ihe mere eme nke yiri ngwaahịa nwere 11% bulie na ọnụego emeghe. Pịa site na ọnụego dị egwu karịa - ndepụta izugbe nwetara a 16% pịa ọnụego, mgbe ndepụta a na-enweta ndepụta zuru oke 72% pịa site na ọnụego.
Na ahịa? Anyị nyochara ọnwa isii nke data wee kpebie na Wednesde bụ ụbọchị kachasị ere ahịa. Wenezdee nke izipu ozi email a, ahịa mụbara 91% karịrị nkezi Wednesday.
Usoro a bụ otu akụkụ nke atụmatụ izu ahia email. Ebe ọ bụ na anyị kwalite Dr. Todd si a ọnyà email template ka a omenala, kachasị email mmemme, mkpokọta weebụ chụpụrụ na email ebiliwo 256%.
Olu nke ntụgharị nke okporo ụzọ ahụ gaa ahịa abawanyela 388% dị ịtụnanya..
Hụ email n'ịntanetị Ebe a.
Tags: pịa-site ọnụegopịa-ọnụegoctremail Marketingstats email
Njikwa Nchọgharị Blog
Jul 19, 2011 na 6:17 PM
nsonaazụ dị ịtụnanya… ụzọ ndị ọzọ ị ga-esi tụọ ọnụego ntụgharị gị dabere na ọnụego pịa na ndị ọzọ…